Ny Fakam-panahy i Jesoa — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ho any amin'ny fizarana voalohany indrindra News
Ny Fakam-panahy i Jesoa
Fa ny Kristianina, ny fanontaniana dia tsy na tsia dia hiatrika fakam-panahy isika, fa ahoana no mamaly rehefa manao. ao amin'ny Lioka 4:1-2, isika dia mamaky momba ny fakam-panahy an'i Jesosy sy ny fomba Hoy ny navaliny. Ity ny raki-peo avy amin'ny toriteny fohy no nitory tamin'izany ny fiangonako andalana amin'ny volana vitsivitsy indray. Te hijery an'i Jesosy 'ny fakam-panahy, handinika ny fankatoavana, ary eritrereto hoe inona azontsika ianarana avy amin'izany toe-javatra. Inona avy ireo zavatra tokony hahatsiaro amin'ny fotoanan'ny fakam-panahy? Ireto ny hevi-dehibe:
I. Andriamanitra no mamela ary Mampiasa Fakam-panahy ho isan'ny ny Plan
II. Fahalemena Tsy fialan-tsiny mba manaiky ho resy
III. Ny Mpaka fanahy Efa Resy
Alaim-panahy Jesosy BragOnMyLord
Mivavaka aho fa ho fampaherezana ho anareo
0 0	nizara
N-Tahir • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:13 aho • navalin'i
James 1:13, “Aoka izy tsy hilaza hoe, raha alaim-panahy ny, “Aho rehefa naka fanahy azy Andriamanitra”; fa Andriamanitra tsy azon'ny ratsy alaim-panahy ho, ary izy tsy maka fanahy na iza na iza.”
Ebube_nwadiei • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:13 aho • navalin'i
Izany indrindra no tonga ambonin'ny aho eto hoe. Andriamanitra dia tsy mampiasa ny fakam-panahy, fa Izy no hamonjy antsika amin'ny ho azontsika, raha mangataka.
tsy fantatra anarana • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:14 aho • navalin'i
Ary nanao mazava tsara fa tsy ho nanao hoe: fa Andriamanitra no maka fanahy antsika i Satana, fa, izao tontolo izao, ary ny nofo. Ny Fanahin'Andriamanitra no nahatonga an'i Jesosy mba halaim-panahy noho ny antony manokana. Andriamanitra dia mampiasa ny fakam-panahy, handresy ny fakam-panahy, ary na dia ny fahotana no manao ny voninahiny.
BPro_12 • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:15 aho • navalin'i
@ N-Tahir @Ebube_nwadiei Henoy ny toriteny manontolo indray. Trip Tsy nanao hoe: Andriamanitra maka fanahy antsika. Izy no nanao hoe: fotsiny fa Andriamanitra no mamela azy. Andriamanitra no mamela toa ka mba haharitra ny alalan 'izany raha matoky azy. Raha misafidy ny manolotra ny faniriana feno fitiavan-tena isika eo anatrehan'Andriamanitra sy fanolorana ny sitrapony, Vokatr'izany dia ho tsara kokoa fifandraisana Aminy, izay farany izay tiany amintsika. Nahoana raha izany dia handefasany ny zavatra manan-danja indrindra ho azy, ny tena Zanany, mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny zavatra tsy hanao?
Nathaniel Babalola • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:15 aho • navalin'i
Izay indrindra. Fa Andriamanitra kosa fitsapana ny antsika, araka izay nataony tamin'i Abrahama. Abrahama dia tsy alaim-panahy, fa izy notsapaina
Jereo ny lahatsary ho an'ny Sweet Fandresena avy amin'ny Trip ny rakikira farany, Mitsangàna
Millennials sy ara-poko Fampihavanana
Izany no lahateny Trip ny avy amin'ny ERLC Summit amin'ny Filazantsara sy ny Firazanana Fampihavanana. Ity ambany ity ny sora-tanana avy izany hafatra. Androany hariva, Aho no nangataka mba hiresaka momba ny millennials sy ny fampihavanana ara-poko. Ary mahatsapa tombontsoa ny hijoro eto sy manompo ao anatin'ny ezaka mahagaga ity mankany amin'ny firaisan-tsaina ao amin'ny fiangonana. Mitovy amin'ny
Inona Topics ve ny Boky Ifanakalozy hevitra?
Ao amin'ny vaovao Trip boky, Mitsangàna, dia nanandrana ny hanoratra momba ny zavatra tsy mifanaraka amin'ity taranaka ity. Jereo raha mandeha amin'ny alalan'ny sasany ny toko ary manome Nisy nanakorontana mangingina tampon'isan'ny amin'ny votoatiny.
"Trip ny nanoratra boky izay mihevitra aho fa ny olona rehetra dia mila tanora mba hamaky. Ny fitiavany an'i Jesosy sy ity taranaka ity dia tonga amin'ny alalan'ny mafy sy mazava ny teny rehetra pejy. Tsy andriko ny hahita ny fiantraikan'ny manana ity hafatra ity amin'ny taranaka izany noana ny tanjona. "- Lecrae, Grammy hanomezako- nahazo mpanakanto @lecrae "Mitsangàna dia
Piper ny Mitsangàna TENY MIALOHA
Trip ny boky vaovao, Mitsangàna, dia avy izao! Vakio ny sasin-teny John Piper ny ny boky etsy ambany. Afaka mialoha mba ny boky sy mianatra bebe kokoa ao amin'ny Risebook.tv Ny iray amin'ireo zavatra lehibe momba ny Trip Tiako Lee sy ny boky, Mitsangàna, dia ny interplay ny fanajana sy ny dehibe. Ny tanjona amin'ny dehibe amin'ny Amerikana ny kolontsaina mahazatra.